Maxaa saameyn ku leh Go'aanka Iibsiga? | Martech Zone
Maxaa saameyn ku leh Go'aanka Iibsiga?
Sayniska ka dambeeya markay dadku sameeyaan go’aanka wax iibsiga waa wax la yaab leh. BigCommerce waa barnaamij caan ah oo loo yaqaan 'SaaS' ecommerce iyo boosteejada gawaarida dukaameysiga. BigCommerce waxay ku siineysaa tiro ka mid ah qalabka elektaroonigga ah ee si ammaan ah loo martigeliyey, oo ay ku jiraan websaydh, magac domain, gaadhigii dukaamaysiga ee aaminka ah, buuga alaabta, albaabka lacag bixinta, CRM, xisaabaadka emaylka, aaladaha suuqgeynta, warbixinnada iyo dukaanka moobiilku ku habboon yahay. Dhawaan waxay soosaariyeen macluumaad faahfaahin ah oo ku saabsan waxa saameyn ku leh go'aanka iibsiga.
Waxaan soo koobeynaa 10ka qodob ee saameynta ku leh go'aanka wax iibsiga, astaamaha dukaanka ugu muhiimsan, saameynta warbaahinta bulshada ee wax iibsiga iyo waxyaabo kale oo badan. Adoo diirada saaraya meelaha saxda ah ee ganacsigaaga iyo dukaankaaga, waxaad ka dhigi kartaa macaamiil saaxiibtinimo badan, oo macnaheedu yahay inaad wax badan iibin doonto. Waa maxay waxa BigCommerce waa dhan oo ku saabsan.
Tags: BigCommercearrimahasaamayntagadashadago'aanka iibsiga